Ivano-Frankovsk - युक्रेनमा अध्ययन. युक्रेनी प्रवेश केन्द्र
Ivano-Frankivsk, युक्रेनमा पश्चिम गर्न निहित जो Ivano-Frankivs'ka Oblast 'को राजधानी शहर हो. यो लगभग एक जनसंख्या संग एक अपेक्षाकृत सानो शहर छ 205,000 मान्छे. शहर को आकार मात्र यसको आकर्षण गर्न अझै यसो भन्छन्.
Ivano-Frankivsk बारम्बार तातार invasions देखि पोलिश-लिथुआनियाली कमनवेल्थ रक्षा गर्न बनाइएको थियो जो एक गढ रूपमा जीवन सुरु. किले ठूलो सफलता थियो र यो लामो थिएन शहर-गढ यो Fortification द्वारा प्रदान सुरक्षा अन्तर्गत बढ्न थाले अघि. यो पहिलो इतिहास मा उल्लेख गरिएको थियो 1662 यो म्यागडेबर्ग अधिकार प्रदान गरिएको थियो जब. शहर टर्की र रूसी सेना अतिक्रमण गरेर तातार आक्रमण मात्र होइन तर पनि यो मा ती thrust बच्न गयो. यो पुनर्जागरण व्यापक वृद्धि र पुन: निर्माण अवधि थियो, एक केहि थप सुरम्य शहर बन्ने यो कुन नेतृत्व. वास्तवमा यो उपनाम नाम प्राप्त 'सानो Leopolis’ - Leopolis लागि ल्याटिन नाम रहेको Lviv. यो बारेमा यो समयमा पनि थियो Ivano-Frankivsk, युक्रेन, आर्मेनियाली संस्कृति को एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र भए.
पोल्याण्ड को 'पोल्याण्ड को विभाजन' मा विभाजित भएको थियो पछि, Ivano-Frankivsk झर्ने गलिशिआ र Lodomeria को स्वायत्त राज्यको डोमेन अन्तर्गत अघि अष्ट्रीया नियम अन्तर्गत आए. 1919 यो धेरै पोलिश-युक्रेनी skirmishes विषयको थियो Ivano-Frankivsk लागि एक अशान्त समय थियो. यो अन्ततः दोस्रो पोलिस गणतन्त्र रूपमा समाप्त भयो, को Stanislawow Voivodship राजधानी रूपमा सेवा. अन्ततः, मा 1939 यो जर्मन र सोभियत सेना द्वारा आक्रमण भएको थियो र युक्रेनी SSR संलग्न थियो. यहूदी जनसंख्या धेरै नाजी पेशा समयमा हत्या भएको थियो, जो शहर इतिहास मा एक धेरै दुःखी अवधि थियो.
अन्ततः, मा 1962, नाम Ivano-Frankivsk गर्न युक्रेनी लेखक इवान Franko पछि परिवर्तन भएको थियो. 1990 को दशक यो युक्रेनी स्वतन्त्रता आन्दोलन केन्द्र को एक बन्न देखे. आज शहर यसको आफ्नै सही मा गर्व अप खडा. यो तपाईं समय हुनुपर्छ अन्वेषण रोचक छ जो दुवै एक विजयी र दुःखी इतिहास संग एक राम्रो शहर हो. किन युक्रेनमा छन् Ivano-Frankivsk अर्को समय भ्रमण र यो आफैलाई लागि प्रस्ताव छ के पत्ता छैन?